मपाईं « Khasokhas Follow @khasokhasmag
प्रकाशित मिति : मंसिर २, २०७४ शनिबार
‘तँ’ को आदरार्थी ‘तपाईं’ भएजस्तै ‘म’ को आदरार्थी ‘मपाईं’ हुन्छ । त्यसैले सभ्य भाषामा ‘तँ’ को ठाउँ तपाईंले ओगटेपछि ‘म’ को ठाउँ ‘मपाईं’ ले नलिनु किन ? ‘म’ लाई संस्कृत वैयाकरणहरुले उत्तम पुरुषको श्रेणीमा पुज्दै आएका छन् भने अरु भाषामा पनि ‘म’ को स्थान प्रथमै छ । त्यसैले हामीले पनि बाह्रखरी पढ्दैदेखि ‘म’ लाई राम्रो ‘म’ भनी मान गर्दै आएका छौं । जब सँगैको ‘तँ’ जाबोले पदोन्नति पाई ‘तपाईं’ भयो भने ‘म’ लाई पदोन्नति दिई ‘मपाईं’ नगराउनु पच्चीसै आना पक्षपात हो, ‘म’ प्रतिको अन्याय हो । यसकारण अरुले ‘तपाईं’ भने पनि नभने पनि हामीले आफूलाई ‘मपाईं’ भन्नै पर्छ, यो युगको माग हो; ‘मपाईं’ को मन्तव्य यस्तै छ ।
‘मपाईं’ शब्द सुन्दा नयाँजस्तो लाग्छ । तर यसको भाव भाषाभन्दा जेठो र इतिहासभन्दा बूढो छ । किनभने मुख चलाउनुभन्दा पहिले मान्छेले ‘म’ को माया गर्न जान्यो, अरुलाई केही मान्नुभन्दा पहिले आफैंलाई सम्पूर्ण ठान्न थाल्यो । फलत: शक्ति बढ्ता हुनेले आफूलाई लायक वा नायक भनाई आत्मआदर खोजे, मपाईं बने; बठ्याइँ बढ्ता हुनेले धर्मकर्ममा अक्कलझक्कल झिकी आफूलाई ईश्वरको नक्कल भनी ‘म’ को महत्ता दर्शाए, मपाईं बने ।
एक पटक ब्रह्मा र विष्णुमा तँ ठूलो कि म ठूले भन्नेबारे गम्कागम्की परेछ, फैसलाको लागि दुवै महादेवकहाँ पुगेछन् । देवमाथिका उपरदेव महादेव, उसै त तपाईंको धुरन्धर, झन् त्यो मौका पाएका । हत्त न पत्त आफ्नो ‘ज्योतिर्लिङ्ग’ तेर्स्याउँदै भनेछन्- “लौ, एक जना उँधो जाऊ, अर्को उँभो । जो यसको फेद वा टुप्पो पत्तो लगाउँछ, त्यही ठूलो ।” मारेन के? न्यायधीश मानिसकेपछि आज्ञा नमानून् कसरी? ब्रह्मा र विष्णु राणाकालीन लाठसाहेबका चाकरीवाल दौडेझैं स्याँस्याँ गर्दै लागे तल-माथि । तर दुवैले लक्ष भट्टाएनन् । कीर्ते साक्षी बकाएर भए पनि आफ्नो मपाईंत्व जोगाउने ब्रह्माको षडयन्त्र पनि असफल भयो । अनि लँगौटी बाँध्दै महादेवले छाँटे- “देख्यौ, को ठूलो रहेछ? मेरा अगाडि तिमीहरुको मपाईंत्व! दुवै उस्तै हौ, लौ जाओ!”
अर्काको तपाईंत्व स्वीकार नगरेर ‘म’ कै महिमा मादल बजाउनु मपाईं बन्नु हो । सभ्यताको जतिजति विकास हुँदै आयो, उतिउति मपाईंत्व प्रवृत्ति पनि विष्णुमतीले मूला मौलाएझैं मौलाउँदै आएको छ । त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति आफूलाई हात्ती सम्झन्छ, अरुलाई बोका । अब समाज हात्तीहात्तीको हो वा बोकैबोकाको हो कसले छुट्याइदिने ?
हिरण्यकशिपुदेखि हिटलरसम्म, अलेक्जेन्डरदेखि एडवर्डसम्म, बाबरदेखि बबरसम्म कसले आफूलाई मपाईं भनेन ? तर के गर्नु! सबै मपाईं ठोक्किए-बरालिने पोइको खाटमुनि गुन्डाका मुन्डा टाउका जुझेझैं । फलस्वरुप नौरङ्गी क्रान्ति भए, संघर्ष भए, युद्ध र महायुद्धहरु भए, आखिर बलियाहरुको मपाईं झन पाक्यो, चतुरहरुको मपाईं झन् चर्क्यो । दब्ने मपाईंको इतिहास माटोमा मिल्यो, जितुवा मपाईंको महिमा चितुवाझैं उफ्र्यो, त्यसैले रामायण लेखियो, रावणायण लेखिएन, ‘चन्द्रमयूख’ देखियो, ‘देवमयूख’ देखिएन ।
मपाईंको त यस्तै खस्रा कुरा गर्ने बानी छ । नास्तिक भनून् वा नाकठाडो भनून्, मपाईंलाई पनि आफ्नो महान् मपाईंत्वमा पूरा विश्वास छ । वास्तवमा मपाईं बन्नु आत्म-आदर खोज्ने मानवीय मनस्थितिको मोटो विशेषता हो । आफू जस्तै बामपुड्के भए पनि अरुलाई होच्याइदिन पाए हातले नछोईकन धर्को लामो पार्ने ‘बीरबल मेथड अफ् डेभलपमेन्ट’ सफल भइरहन्छ । त्यसैले होला खुश्चेभले मरिसकेको स्तालिनकको जरैसम्म जुँघा उखेलेर मपाईं बने । त्यसैले त जुनसुकै गल्लीमा भेटिने जोसुकै मान्छेसित सोध्नोस्- सब चोर, सब लोफर, सब आवारा, सब नामर्द, सद्दे भन्नु उही मात्र, जो तपाईंसँग हाँकिरहेको हुन्छ ।
मपाईं- न धार्मिक दृष्टिले पाप हो, न कानुनी दृष्टिले अपराध । मागेर खानेदेखि मात्तिएर खानेसम्म सबैलाई आफ्नो महिमा गाउने मौलिक अधिकार छ । त्यसैले त अचेल जसले आङ्देखि टाङ्सम्म रङ्गीचङ्गी प्वाँख जडेर आफ्नो महत्ता दर्शाउन सक्छ त्यो महान् हुन्छ । कामले नसके कुराले, दिमागले नभ्याए सुराले, जसरी भए पनि आफ्नो महत्ता बढाउनुपर्छ, अनि स्वास्नीले नुन किन्न पठाउँदा “नुनभन्दा चुन सेतो रे’छ बूढी” भन्दै चुनको पोको गोजीमा हालेर आउने भलादमीले पनि चतुर चन्द्रको उपाधि पाउन सक्छ । युग मपाईंको हो । त्यसैले युगअनुसार आवाज हुनुपर्छ, आफ्नो सह्रनी आफैंले गर्नुपर्छ- अरु कसले गरिदिन्छ ?
हाम्रा साहित्यिकहरुले पनि यो कुरा छर्लङ्ग बुझेका छन् । त्यसैले कोही आफूलाई शेलीको सालो ठान्छन् त कोही मिल्टनको मामा । कुनै पनि सभासम्मेलन वा समारोहमा जानोस- कर्केछड्के हावभावका साथ मञ्चमा उभिनेचाहिँ कवि वा वक्ता सुनाइरहेको हुन्छ- मपाईं-महिमा । सुन्नेहरुचाहिँ खासखास खुसखुस गर्दै सुनाउनेलाई तीन कौडीमा पनि नगनी आफआफ्ना महत्त्वको महिमा गाइरहेका हुन्छन् । यसै क्रममा सम्मेलन सिद्धिन्छ । अरुले लेखेको पनि पढिदेऊँ, अरुले बोलेको पनि सुनिदिऊँ, अरु पनि तपाईं हुन् भन्ने प्रवृत्ति कसैमा छैन । किनभने यो ‘नामकरण’ को बेला हो, कामकरणको होइन ।
मपाईं त छँदै छन्, अझ त्यस्ताको मपाईं रमाइलो हुन्छ, जसलाई कसैले झुक्किएर पनि तपाईं भनिदिँदैन । बिचराहरु आफ्नो महत्ता देखाउन टोपीको चुच्चोदेखि जुत्ताको टुप्पोसम्म झिलिक्क पार्दै दिनदिनभर मूल सडक चक्कर मार्छन् । सिउन लागेको सूचीकार देखे पनि, पिउन लागेको जँड्याहा देखे पनि ‘हलो’ भन्दै हात मिलाउँछन् । एक-दुईवटा फिल्मी गीत गुनगुनाएर उसको ध्यान तान्न खोज्छन् । जब कसैले पनि वास्ता गरिदिँदैन, घरमा गएर स्वास्नीलाई हकार्छन्- “बुझिस्, मलाई दुनियाँले कत्रो सन्मान गर्छ, तर तैं जैरी मात्र मेरो महत्ता बुझ्दिनस् बाबै!” यस्ता पुङ न पुच्छरका मपाईंहरु जत्ति धेरै भए मपाईंलाई चाहिँ उत्ति रमाइलो लाग्छ । किनभने भेट हुनासाथ “ओहो तपाईंजस्तो” भनिइपछि कमसेकम भोजन वा सिनेमाको निम्तो पाइहालिन्छ । कोही यस्ता अभागी पनि हुन्छन् ख्वाउँदा-प्याउँदा पनि प्रशंसा पाउँदैनन् । त्यस्ताको मपाईं यस्तरी बटारिन्छन् कि अर्थ न बर्थ धोक्रो फुला नबवचएर तीन धोक्रो रिस मनमा कोची मनमनै आफ्नो प्रशंसा गर्न थाल्छन् ।
दुबै डोज भ्याक्सिन लगाएपछि पनि संक्रमित जीवा लामिछानेको ‘कोभिड अनुभव’
(जर्मनीमा बस्दै आउनुभएका नेपाली उद्यमी एवं एनआरएनएका भूतपूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले कोरोनाबिरुद्धको दोश्रो डोज लगाइसकेको
न्यायाधिसलाई बालिकाको पत्रः बचाउनुहोस वा त्रासदीपूर्ण जीवनबाट मुक्त हुने औषधी दिनुहोस्
(यो पत्र सत्य घटनामा आधारित रहेर बनाइएको काल्पनिक पत्र हो । पत्रमा उल्लेख भएका सबै
मैले कमजोरी गर्दा संसार छाडिसकेकी मेरी आमालाई दोष !
– अस्मिता खड्का मन अलिबढी हतास र निराश भयो कि आमाको धेरै याद आउँछ ।
यो रेडियो जनगणतन्त्र नेपाल हो…
– किशोर पन्थी ‘यो रेडियो नेपाल हो, अब प्रविण गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्………’ विहान ७ बजे